Sina Topy maso sy toetra mampiavaka ny valva fanaraha-maso mpanamboatra sy mpamatsy | Guorui
Hydraulic fitaovana paompy
Monoblock miditra tsimoramora
Sectional miditra tsimoramora
mitanila miditra tsimoramora
Topimaso sy toetran'ny valves fanaraha-maso
Ny valva fanaraha-maso dia mikraoba miankina amin'ny fanovana ny fanoherana ny tsiranoka amin'ny orifice mba hifehezana ny fikorianan'ny orifice ao anatin'ny fahasamihafana tsindry iray, amin'izay hanitsiana ny hafainganan'ny fivezivezena ny actuator (varingarina hydraulic na motera hydraulic). Izany dia ahitana indrindra valizy throttle, valizy fanaraha-maso hafainganam-pandeha, valizy throttle overflow ary valizy mpanangona diverter. Ny endrika fametrahana dia fametrahana fametrahana marindrano. Ny fomba fifandraisana dia mizara ho karazana flange sy karazana kofehy; karazana welding. Ny fomba fanaraha-maso sy fanitsiana dia mizara ho mandeha ho azy sy ny boky fampianarana.
Ny valizy fanaraha-maso mikoriana, fantatra koa amin'ny hoe 400X flow control Valve, dia valizy marolafy miasa izay mampiasa fomba fanamoriana avo lenta hifehezana ny fikorianany.
1. Fanovana ny fitsipiky ny fampihenana ny faritry ny rano amin'ny alàlan'ny fampiasana takelaka orifice na valizy fanodinana mekanika fotsiny, amin'ny alàlan'ny valizy mpanamory mifandraika amin'izany mba hampihenana ny fahaverezan'ny angovo amin'ny fizotry ny famonoana
2. fahatsapana avo lenta, azo antoka ary azo itokisana, debugging mora ary fiainana lava.
Ny valizy fanaraha-maso dia afaka manatratra ny fifandanjan'ny rafitra tsy misy famatsiana herinaratra ivelany. Ny mikoriana dia voafetra amin'ny alàlan'ny fitazonana ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry eo anoloana sy aorian'ny orifice (aperture raikitra) tsy miova, noho izany dia azo antsoina koa hoe valizy tsy miova.
Ny tanjon'ny valizy tsy miova dia ny mikoriana, izay afaka manidy ny habetsaky ny rano mikoriana amin'ny valva, fa tsy ny fifandanjan'ny fanoherana. Azony atao ny mamaha ny olan'ny tsy fifandanjana mavitrika amin'ny rafitra: mba hitazomana ny fiasan'ny vata fampangatsiahana tokana, vata, tilikambo fanamafisana, mpanondrana hafanana, sns., Ilaina ny mifehy ny fizotran'ireo fitaovana ireo hamboarina ao ny sandany naoty; avy amin'ny faran'ny rafitra, mba hialana amin'ny fieritreretana ny fanitsiana mavitrika koa dia mitaky famerana ny fikorianan'ny fitaovana farany na sampana.
Ny olana tokony hojerena amin'ny famolavolana, ny fatiantoka amin'ny valizy fanaraha-maso dia ny valizy dia manana fepetra takiana amin'ny fahasamihafana farany ambany. Ny vokatra ankapobeny dia mitaky fahasamihafana tsindry miasa 20KPa. Raha apetraka amin'ny faritra tsy dia tsara indrindra dia tsy maintsy ihodinany ny paompin-tsolika miakatra amin'ny 2 metatra ny tsanganana rano. Ny lohan'ny miasa dia tokony hapetraka amin'ny farany akaiky ary tsy mahazo aina any amin'ny farany lavitra. Aza apetraka ity valizy fanaraha-maso mikoriana ity rehefa lavitra ny loharanon'ny hafanana mihoatra ny 80% ny tariby fanafanana ny mpampiasa.
Fotoana fandefasana: Apr-21-2021
Fanadihadiana momba ny tsy fahombiazan'ny hydraulic ...
Fanasokajiana valves hydraulic
Ny mahasamihafa ny sys hydraulic hidina ...
Ny haben'ny tsenan'ny anhidrida Trimellite, manerantany ...
© Copyright - 2010-2019: Voatahiry ny Zo rehetra. Products Guide - Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - AMP Mobile